तपाइँको वेबसाइटमा आगन्तुकहरूलाई कसरी डाइरेक्ट गर्ने भन्ने बारेमा Semalt बाट SEO सुझावहरू
इ-कमर्स आज अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको फ्रन्टियर भएको छ। उत्तर अमेरिकामा मात्र, खुद्रा व्यापारको लेनदेनको online% अनलाइन हुन्छ र यो संख्या दशकको अन्त्यसम्ममा दोहोरो अंकले हिर्काउने आशा गर्दछ।
सँधै चौराउने र ई-वाणिज्य स्थानमा जम्मा हुने, तपाईंको लक्षित सम्भावित ग्राहकहरूलाई तपाईंको प्लेटफर्ममा निर्देशित गर्ने चुनौती खडा हुन्छ। उत्तर तपाईं सम्बन्धित उत्पादनहरू र सेवाहरूमा सबै खोजीहरूको शीर्षमा आउनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नमा निहित छ। तसर्थ खोजी ईन्जिन अप्टिमाइजेसन (एसईओ) यस स्तर निर्धारणलाई सरल बनायो।
सतह मुनि, एसईओ एक जटिल एल्गोरिथ्म र कडा दिशानिर्देश जस्तै Google वेबमास्टरमा निर्भर गर्दछ। वेबसाइट विकासकर्ताहरूले नियमित साइट रखरखाव तालिका प्रदर्शन गर्नु पर्छ एल्गोरिथ्मको लागि अनुरूप जबकि गुगलले जारी गरेको नयाँ अपडेटहरू पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ। त्यसो गरेर, तपाईं मद्दत गर्न वा तपाईंको खोज इञ्जिन रैंकिंग सुधार गर्न सक्षम हुनुहुन्छ र परिणाम स्वरूप तपाईंको साइटमा ट्राफिक निर्देशित गर्नुहोस्।
यो जटिल एल्गोरिथ्मले २०० भन्दा बढी कारकहरू समावेश गर्दछ। इभान कोनोवालोभ , Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक, यसलाई तीन मुख्य सबसेटमा वर्गीकृत गर्दछ।
१. प्राविधिक वेबसाइट सेटअप
एक Quintessential e- वाणिज्य वेबसाइट को सिमलेस र उपयोगकर्ता मैत्री ईन्टरफेस को आवश्यकता छ, जसले तपाईंको सम्भावित ग्राहकलाई सबै सुविधाहरू र सामग्रीसँग अन्तर्क्रिया गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं डिजाइनको गुणवत्ता वा सामग्रीको गुणस्तरमा सम्झौता गर्न सक्नुहुन्न। नेभिगेसनलाई मेनु पट्टीको साथ सजिलो बनाउँनुहोस्, बिक्री भाषा र कम शब्दहरूको प्रयोग गरी सामग्री वर्णन सटीक तरिकाले लेख्नुहोस् र सम्पूर्ण वेबसाइटमा समान कुञ्जी शब्दहरू समान रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। एक ग्राहक एक लग बन्द जब, तिनीहरूले आफ्नो जीवनको सबै भन्दा राम्रो प्रयोगकर्ता को अनुभव संग छोड्नु पर्छ। यसैले किन वर्णन गर्दछ कि किन प्राय e-वाणिज्य वेबसाइटहरूले आधिकारिक रूपमा साइट अनलाइन सुरू गर्नु अघि फोकस समूहहरूको प्रयोगकर्ता इनपुटलाई संलग्न गर्दछ। यस प्रक्रियाको क्रममा, उनीहरूले विसंगतिका कुरा गरे, डिजाइन, लेआउट, सामग्री र समग्र नेभिगेसनमा सुधार गरी अन्तिम प्रयोगकर्तालाई पूर्ण ई-वाणिज्य प्लेटफर्म प्रदान गर्दै।
२- पृष्ठ एसईओ सामग्री अनुकूलन
यहाँ अप्टिमाइजेसनले तपाईको वेबसाइटको बारेमा के हुन्छ भनेर वर्णन गर्नको लागि प्रयोग गरिएको विवरणहरूको सन्दर्भ गर्दछ। यहाँ, तपाईले सान्दर्भिक र सही कुञ्जी शब्दहरूको प्रयोग गर्नुपर्दछ जुन वेबसाइटमा प्रस्तुत उत्पाद वा सेवा प्रतिबिम्बित गर्दछ साथै खोजी परिणामहरूमा श्रेणीकरणको लागि यसको डाटा जुन प्रतिस्पर्धाहरूको तुलनामा तपाईंको स्थिति देखाउँदछ। तपाईंले खोजशब्द अनुसन्धानको महत्त्वको कदर गर्नुपर्छ र यसलाई आन्तरिक र बाह्य लि link्क निर्माणको साथ साइटको विश्वसनीयता र प्रासंगिकता दिन प्रयोग गर्नुपर्दछ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईंको वेबसाइट दुबै डेस्कटप कम्प्युटर र मोबाइल प्लेटफर्महरूमा स्वीकार्य लोडिंग गति र उच्च गुणवत्ता छविहरूको साथ परिचालन गर्नुहोस्।
Off. अफ पृष्ठ एसईओ अनुकूलन
एक ई-वाणिज्य वेबसाइट प्लेटफर्मसँग क्रेडिट कार्ड जानकारी सुरक्षित गर्न SSL प्रमाणपत्र हुनुपर्दछ। यो इजाजत पत्रले तपाईंलाई विश्वासका साथ भर्चुअल भुक्तानी प्रक्रिया गर्न सक्षम गर्दछ, तपाईंको ग्राहकहरूको लागि सहज रूपमा। अन्तमा, तपाइँको वेबसाइटसँग सँधै ताजा र सान्दर्भिक SEO सामग्री हुनुपर्दछ त्यसैले यसको सक्रिय Google र अन्य खोज इञ्जिनहरूले देख्न सक्ने छन्। निस्क्रिय वेबसाइटले केही फरक पार्दैन पनि चासोको अभावको लागि खोजी नतिजा रैंकिंगमा कति राम्रो हुन्छ। नियमित रखरखावको पनि मतलब वेबसाइटले तपाईंको ग्राहकहरूलाई प्रदान गर्नेको वास्तविक विवरण प्रतिबिम्बित गर्दछ। जहिले पनि वेब साइट प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रतिक्रिया संयन्त्रहरूमा संलग्न गराउनुहोस् तपाईंको प्रयोगकर्ता अनुभवलाई अझ बढी सुधार गर्नको लागि।